MISS WORLD 2000: 117 maalmood iyo furitaan ayaa raacaya !!! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » aan caadi ahayn • DADKA & LIFESTYLE »MISS WORLD 2000: 117 maalmood iyo furitaan ayaa raacaya !!!
Miyuu biyo ku jiraa gaaska inta u dhexeysa Priyanka Chopra iyo Nick Jonas? Sida laga soo xigtay wargayska maraykanka, dhawaanahan ayaa horay u fekeray in ay isfuraan, kaliya shan bilood ka dib arooskooda ...
Bishii December ee sanadkii hore, Priyanka Chopra iyo Nick Jonas ayaa nala rumaystay in sheekada caanka ah ay mar kale soo abaabushay arooska sannadka. Waxaan doonayaa inaan guursado dhowr bilood ka dib bilawga sanadka, bamka Hindiya 36 oo loo doortay Miss World ee 2000 iyo sanadka caanka ah ee caanka ah ee 26 ayaanan ka waabanin abaabulin aroos qurux badan oo aan ka yarayn saddex xaflado kala duwan oo ku faafay bil gudaheed.
Tan iyo markii guurkooda, labada dhalinyaradu waxay sii wadaan inay sii kordhiyaan mudaaharaadka jacaylka ee shabakadaha bulshada. Sidii ay labadan gabdhood oo kale ah, Danielle iyo Sophie, Priyanka quruxda badan ayaa ka muuqda filimkii ugu danbeeyay ee Jonas Brothers kuwaas oo hadda saxiixay soo laabashadooda muusikada.
Saxaafadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday furiin
Hase yeeshee, inkastoo muuqashooyinkan udhaxeeya, wargayska maraykanka OK magazine ayaa hadda soo saartay daabacaad ay ku dhawaaqday furitaanka lamaanaha dhallinyarada ah. Sawirka sawirka Priyanka iyo Nick, magaca saxaafada ee weyn "KALA DUWAN TAHAY XANUUNKA MAALMOOD! ", waxaa ku xiga macluumaadka soo socda: "Lies, dood iyo khiyaamo ... sababta uu qoyskiisa uga baryootay inuu dhammeeyo guurka, 2 million dollar ayaa lagu baabi'iyay arooska ..."
"Waxay u dhaqantaa sidii ay ahayd 21 sano jir"
Sida laga soo xigtey wargayska isla markaana, Nick Jonas ayaa si dhaqso ah u jahwareersan lahaa isagoo raadinaya wejigii saxda ahaa ee xaaskiisa: Nick wuxuu u maleynaayay in Priyanka uu si sahlan u socdo markii ay is qabteen laakiin wuxuu arkay kaliya inuu rabo inuu xakameeyo. Sidoo kale, iyadu waxay soo bandhigtay dhinaceeda cadhaysan, waxkastoo Nick uusan ogaan ka hor arooska ».
Haddii wargeysku sidoo kale tilmaamayo xaqiiqda ah in aysan saxiixin heshiiska guurka iyo in furiinka, actress uu dhaxli karo nuska nasiibka fannaanka, waxa kale oo uu muujinayaa in kastoo uu muuqdo, in-sharciyada ma qadarin: "Waxay u maleynayeen in Priyanka ay tahay haween baaluq ah oo ay diyaar u tahay in ay bilawdo qoys laakiin waxay ogaatay in ay tahay gabar xaflad ah oo u dhaqantay sidii ay ahayd 21 sano jir.